Eukaryotic tusingaoneki ive Kamudzira-akasungwa muchitokisi organelles uye anosanganisira notumwe uye protists, asi prokaryotic zvinenge-zvose zviri tusingaoneki-vari conventionally semhosva kushayikwa Kamudzira-akasungwa organelles uye anosanganisira eubacteria uye archaebacteria. Microbiologists dzinozivikanwa aivimba tsika, staining, uye microscopy. Zvisinei, asingasviki 1% of tusingaoneki aripo zvakafanana runyararo zvinogona cultured yega vachishandisa iyezvino nzira.  Microbiologists kazhinji vanovimba ezvinhu zvipenyu munowanika DNA kutevedzana kunobva zvitupa, muenzaniso 16s rRNA Gene kutevedzana yaishandiswa utachiona kuziva.
Zvidukuduku kudzidza zvose zvipenyu zviri duku kuti vaonekwe nevanhu kusimira ziso. Izvi zvinosanganisira utachiona, archaea, nemavhairasi, notumwe tupukanana prions, majemusi uye algae, vainziwo rinozivikanwa 'tupukanana'. tupukanana izvi kuridza mabasa anokosha mune inotonhorera kuchovha, biodegradation / biodeterioration, kuchinja kwemamiriro ekunze, zvokudya spoilage, chikonzero uye kudzora chirwere, uye hwokushandura zvinhu zvipenyu. Pamusana pakawanda yavo, utachiona inogona basa munzira dzakawanda: kuita zvinodhaka rinoponesa upenyu-, anogadzira zvinhu biofuels, kuchenesa kusvibiswa, uye kubudisa / kubudiswa zvokudya uye zvokunwa.
Microbiologists kudzidza utachiona, uye vamwe anokosha zvakawanwa kuti underpinned nzanga dzemazuva ano zvakaguma kubva pakutsvakurudza pamusoro microbiologists wakakurumbira, akadai Jenner uye ake mushonga kuzorwa chibhokisi, Fleming uye kuwanikwa kuti penicillin, Marshall uye kuziva kubatana pakati Helicobacter pylori hweHIV uye dumbu maronda, uye zuri Hausen, uyo akaratidza kubatana pakati papilloma utachiona uye gomarara.
tsvakurudzo zvidukuduku kwave, uye anoramba, rinokosha musangano dzakawanda kuitika pose zvido uye nematambudziko, zvakadai sokuchengeta zvokudya, mvura uye simba rubatso hwakanaka nevanhu pamusoro inogarwa pasi. tsvakurudzo zvidukuduku ruchatibatsira kupindura mibvunzo mikuru yakadai se 'siyana sei upenyu Panyika?', uye 'anoita upenyu zviripo kumwewo Universe'?
Post nguva: Dec-04-2018